रंग विरंग Archives - jagritikhabar.com
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दर्शकले धेरै रुचाएका जोडी हुन् पूजा आकाश। यिनीहरुले फिल्मदेखि म्युजिक भिडियोसम्म स्क्रिन शेयर गरे। पर्दामा रुचाएको जोडीलाई रियल लाइफमा देख्ने धेरै दर्शकको चाहना थियो । एक समय यिनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर मनोरञ्जन उद्योगमा राम्रै चर्चा हुन्थ्यो। फिल्मदेखि म्युजिक भिडियो प्रमोसनमा...
पल प्रकरणमा बोलेपछि विबादमा तानिएकी पूजालाई रोएरै फिल्म हिट बनाएको आरोप
काठमाडौं । पछिल्लो समय एकदमै बिबादमा तानिने नायिका मध्ये एक हुन् पुजा शर्मा । उनी चलचित्रमा जति सफल भईरहेकी छिन् त्यति नै बिबादित पनि । चलचित्र पत्रकार प्रकाश सुबेदीले सोधेको सामान्य ज्ञानको उत्तर दिन नसकेको देखि लिएर रोएरै आफ्नो फिल्म हिट बनाएको सम्मका आरोप...
चर्चित गायिका इन्दिरा जोशीले आज विबाह गर्दै
काठमाडौं : गायिका इन्दिरा जोशी जेठ ३१ गते विवाह बन्धनमा बाधिदैछिन् । उनी उनले प्रेमी तथा फेसन डिजाइनर शरद केडियासँग विवाह बन्धनमा बाधिन लागेकी हुन् । उनले हल्दी लगाएका तस्विर हरु सामाजिक संजालमा सेयर गरेकी छन् । तस्विरमा उनी निकै सुन्दर अनि खुशी देखिएकी...
अस्पतालबाटै रुवाबासि, एकाएक के भयो यस्तो अनितालाई !
काठमाडौं । पछिल्ला केही दिन अघि अनिताको स्वास्थ्यमा एकदम‌ै धेरै सुधार देखिएको थियो र उनको अनुहारमा बेग्लै चमक पनि थियो।उनी दिनानुदिन झनझन सुधारिदै गैरहेकि थिइन ,यशै क्रममा अनितालाई भगवान जस्ता श्रीमान बिनोदले अस्पतालबाट आफ्नो घर गुल्मिसम्म आफैले डोर्याएर काखमा सुताएर लगेका थिए । दशै/तिहार...
नीता ढुंगाना र हरिहर अधिकारी लगनगाँठो कस्दै, जुर्याे शुभसाइत !
काठमाडौँ । नायिका नीता ढुंगाना र नायक हरिहर अधिकारी आगामी असार २४ गते विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन् । केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरुले विवाह गर्न लागेका हुन् । यद्यपि आफ्नो प्रेम सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका पनि छैनन्, लुकाएका पनि छैनन् । स्रोतका अनुसार...
सबै महिलाले प्राय: गर्ने यी सामान्य गल्ती जसले आफ्नो पुरुष पार्टनरलाई नपुंशक बनाइरहेको छ !
काठमाडौं । दैनिक जीवनमा त्यहाँ केहि कुराहरू छन्, जुन पुरुषहरूले मन पराउँदैनन् । तीमध्ये कतिपय यस्ता काम हुन्छन्, जुन ओछ्यानमा मात्रै गरिन्छ । कुनै पनि पुरुष साथिले त्यो महिला साथिसँग शारीरिक सम्पर्क राख्न चाहँदैन, जसले शारीरिक सम्पर्कका क्रममा केही सामान्य कुराहरू गर्छिन् । महिलाको...
मेरो लब किन पर्दैन त ? कोही छ मसग लभ गर्ने असल केटा !
काठमाडौं । आखिर किन रु मेरो लब पर्दैन त रु कोही छ मसग लभ गर्ने असल केटा‘।।निशा राई टोलको एकजना शुभचिन्तक आन्टी प्राय सोधिरहन्छिन् ‘हैन तिमी बिहेचाहीँ कहिले गर्ने नि। म अलि फिल्मी पारामा स्टाइल मारेर जवाफ दिन्छु ‘मन परेको मान्छे पो लोग्ने बनाउने...
एलिजाको जोडी हुन मानेनन् कुन्साङ, घुइँचो टिम तनावमा
काठमाडौँ । बढो तामझामका घोषणा भएको थियो फिल्म ‘घुइँचो’ को। नायिका घोषणा गरियो एलिजा गौतम अनि नायक कुन्साङ बोमजङ। बोमजङ नायिका मलिका महतको जोडि बनेर म्युजिक भिडियो खेलेर चर्चामा आएका थिए। तामझामका साथ घोषणा गरेको कार्यक्रममा जब फिल्म निर्देशनको रूपमा दीपेन्द्र लामाको नाम आयो...
अभिनेत्री पुजाका यिनै हुन् प्रेमी, बिहे नै गरिसकेको चर्चा
काठमाडौं । चलचित्र बजार गसिपको क्षेत्र हो । पर्दा अगाडि देखिने कलाकारको विषयमा दैनिक रुपमा आउने गसिप कहिलेकाहीं उनीहरुका लागि चर्चाको राम्रै खुराक बन्छ भने कहिलेकाहीं टाउको दुखाइको विषय । अझ एउटै चलचित्रमा काम गर्ने नायक र नायिकाको प्रेम सम्बन्धको खबर त हलिउड, बलिउड...
के सलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाले बिहे गरेकै हुन् त ? के हो वास्तविकता जान्नुहोस ?
काठमाडौं : वलिवूड अभिनेता सलमान खान, आजको समयमा सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा सायदै यस्तो कोही होलान् जसलाई यो नाम थाहा नहुन सक्छ । किनभने सलमान खानको सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकतर्फी नाम छ, जसका कारण आजको समयमा उनलाई सिंगो फिल्म इन्डस्ट्रीले… वलिवूड अभिनेता सलमान खान, आजको...